काठमाडौँ । मुनाल शिशिर कोइरालाको शब्द तथा नरहरि प्रेमीको सङ्गीत रहेको ‘मेरो बोली सुन्दा’ बोलको गीत एक दशकपछि महिला आवाजमा सार्वजनिक भएको छ । गीतमा रुपक डोटेलले स्वर दिएका छन्। गीत रिलिज भएको करिब एक दशकपछि महिला आवाजमा सार्वजनिक भएको हो । जसमा गायिका सुजाता केसीको स्वर छ ।
काजोलको नाम ‘मर्सिडीज’ राख्न चाहन्थे उनका बुबा
पर्दाबाट टाढा भएपनि उनको लोकप्रियतामा कमी आएको छैन । काजोल आफ्नो हँसिलो र कूल स्टाइलका लागि पनि चिनिन्छिन् । काजोल अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी र फिल्म निर्माता शोमु मुखर्जीकी छोरी हुन् ।
कार्तिक आर्यन र करण जोहरबीचको मनमुटाव अन्त्य
एजेन्सी । कार्तिक आर्यन र करण जोहरको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
‘पुष्पा २’ मा रश्मिका मन्डन्नाको भूमिका रहेको ‘श्रीवल्ली’को मृत्यु हुन्छ ?
एजेन्सी । साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुन र रश्मिका मन्डन्ना यतिबेला आफ्नो आगामी फिल्म ‘पुष्पाः द रुल’ लाई लिएर चर्चामा छन् । केही दिनयता ‘पुष्पा–२’ मा रश्मिका मन्डन्नाको चरित्र ‘श्रीवल्ली’को मृत्यु हुने खबर आएको छ । यसबारे ‘पुष्पा’का निर्माता वाय. रविशंकरको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ ।
यो दिन रिलिज हुँदैछ अजय देवगनको फिल्म ‘दृश्यम २’
एजेन्सी । अजय देवगन र तब्बु एकपटक सस्पेन्स थ्रिलर फिल्मको रिलिज डेट फाइनल भएको छ । चर्चित फिल्म ‘दृश्यम’ को सिक्वेल ‘दृश्यम २’ को रिलिज मिति घोषणा गरिएको हो ।
नेपाल आइडल प्रतियोगी पवनले ल्याए ‘माया बस्यो है’
काठमाडौँ। नेपाल आइडलका चर्चित प्रतियोगी पवन गिरीले आफ्नै स्वर, शब्द र संगीतमा नयाँ गीत ‘माया बस्यो है’ ल्याएका छन्। मायाप्रेमका बिषय समेटिएको गीतको भिडियो पनि बनेको छ। जसमा साक्षी लम्साल, बिष्णु खरेल र सरोज केसीको अभिनय देख्न सकिन्छ।
अजय स्टारर ‘दृश्यम २’ को सुटिङ सकियो, कहिले हुँदैछ रिलिज ?
एजेन्सी । यसअघि चलचित्र ‘दृश्यम’ हेरेको दर्शकलाई विजय साल्गनकरको क्यारेक्टर याद होला ।
अभिनेत्री मौनी रोयको बोल्ड लुक्स
एजेन्सी । टिभी तथा बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले कडा मेहनतका आधारमा आफ्नो बेग्लै स्टारडम बनाउन सफल भएकी छन् । उनी आफ्नो प्रोजेक्टभन्दा पनि आफ्नो सुन्दरता र ग्ल्यामरस लुक्सका कारण चर्चामा रहन्छिन् ।
चलचित्र ‘२ नम्बरी’को फस्टलुक सार्वजनिक
काठमाडौँ। चलचित्र ‘२ नम्बरी’को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ। दयाहाङ राई र सौगात मल्लको अभिनय रहेको चलचित्र ‘२ नम्बरी’को फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको हो। दीपेन्द्र लामाको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्मको फस्टलुकमा दयाहाङ र सौगातलाई फरक गेटअपमा देखाइएको छ।
भजन ‘मानव जीवन’को भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौँ। गायक इन्द्र लामिछानेको स्वर रहेको ‘मानव जीवन’ बोलको भजन सार्वजनिक भएको छ। लोकप्रिय गायक तथा संगीतकार किशोर शिवाकोटीको शब्द शृजना तथा संगीत रहेको गीतमा कुमार थापाको एरेन्ज रहेको छ। जसमा मिक्स तथा मास्टरिगं किशोर थापाको रहृको छ।